Seteembar | 2008 | WEEJIDOW
Archive for Seteembar, 2008
Xildhibaan katirsan Baarlamanka oo u dhashay Muqdisho ayaa ku eedeeyay AMISOM in ay gumaad wadaan.
Seteembar 30, 2008
Xirsi Aadan Rooble oo ku abtirsada beelaha ku dhaqan magaalada Muqdisho isla markaana wasiir kuxigeen mar kasoo noqday Somaliya ayaa shaaca ka qaaday in Ciidamada AMISOM ay Muqdisho ka wadaan Gumaad ku jeeda shacab aan waxba galabsan.
Xildhibaan Xirsi oo shir jaraa’id maanta ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa cadeeyay inaan loo dul qaadan karin howlgalladii ugu danbeeyay ee Ugandeesku ka sameeyeen Muqdisho halkaasi oo ay ku laayeen dad badan oo rayid ah.
Waxa uu ku eedeeyay Ciidamada AMISOM in ay si bareer ah ula qasdeen madaafiicdooda taankiyada iyo kuwa hoobiyeyaasha suuqa weyn ee Bakaaraha isla markaana ay ku dileen dad tobaneeyo ka badan mudo laba maalmood ah.
Xildhibaankaasi oo ah kii ugu horeeyay ee katirsan Baarlamanka kana hadla dhacdooyinkii Bakaare ayaa ku adkeystay in aan laga aqbali karin AMISOM tacadiyadaasi isla markaana lagula xisaabtami doono.
Cumar Xaashi ”Al-shabaab ma xiri karaan garoonka,wuuna furan yahay garoonka iyagaana masuul ka ah dhibaatada shacabka’.
Xoghayaha arrimaha gudaha ee Isbaheysiga Xoreynta garabkiisa Jabuti Cumar Xaashi Aadan oo kamid ah Guddiga amaanka ee isku dhafka ah ayaa ku eedeeyay xoogaga Al-Shabaab ee Muqdisho jooga in ay masuul ka yihiin dhibaatada duqeymaha kasoo gaarta shacabka Somaliyeed ee ay geystaan Ciidamada shisheeye ee Muqdisho jooga.
Cumar Xaashi oo si caro leh uga hadlayay dalka Jabuti ayaa ku calaacalay in garoonka diyaaradaha Muqdisho aysan xiri karin Al-Shabaab isla markaana uu furan yahay balse ay tahay in ay shacabka uun dhibaateeyeen sida uu hadalka u dhigay.
Xoghayaha arrimaha gudaha ee Isbaheysiga garabkiisa Jabuuti waxaa uu gaashaanka u daruuray sheegashooyinkii Al-Shabaab ay ku xireen garoonka diyaaradaha Muqdisho,waxaana uu soo jeediyay in lagula xisaabtamo dhibaato waliba oo shacabka kasoo gaarta arrimahaasi.
Maahan masuulki ugu horeeyay ee katirsan Mucaaradka fadhiya Jabuuti oo kasoo horjeesta xiridda garoonka diyaaradaha ee Muqdisho,waxana hadalkiisaasi uu imaanayaa 15 maalmood mudo ku dhaw oo garoonkaasi aysan shaqadii caadiga aheyd ka jirin.
Asalaamu Caleykum Waraxmatullahi Wabarakaatuh
Waxaan jeclahay inaan hambalyo ku aadan dhalshada ciidul fidriga halkaan uga diro guud ahaan dadka muslimiinta ah iyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaanna walaalaha Soomaaliyeed oo dhan. Hambalyo, Hambalyo, Hambalyo, waxaan Ilaahey ka baryayaa in aynu noqonno kuwii ku ciida farxad iyo raynrayn. Waxaa la inooka baahan yahay in aynu farxadda maalinta ciidul fidriga ah la wadaagno dhammaan dadkeena oo dhan gaar ahaan inta aan awooda u laheyn inay maanta farxad ku ciidaan.
Sidoo kale, waxaan Ilaahey ka baryayaa in aynu noqono kuwi laga aqbalo Soonkooda, cibaadadooda iyo sadaqadoodaba.
Mar walba waa ineynu ku dadaaalo iskana xilsaarno ammaanka, xasiloonida iyo midnimada bahweynta reer Puntland taas oo gogoldhig adag u ah midnimada iyo iskuduubnida dadka iyo dalka Soomaaliyeed.
Waxaan Ilaahey ka baryayaa in aynu ciidan ciideeda ku gaarno nabadgelyo, xasillooni, barwaaqo, cadaalad iyo maamul wanaagsan.
Shiikh Yuusuf Siyaad Indha Cadde Shiikh Shariif Been buu Sheegayaa ee Ilaah Ha u Tooban Keeno
Shiikh Yuusuf Siyaad Indha Cadde oo ah Xogeeyahay Difaaca ee isbahaysiga Dib u xuraynta Dalka Soomaaliya Garabka Asmara ayaa shegay in uu Shiikh Shariif in uu been ka Shegay Bixitaanka Ay ka baxeen Gobolka Hiiraan Ciidamada Dowlaada itoobiya oo in Mudda ah Joogay Gobalkaas .
Shiikh Yuusuf Siyaad Indha Cadde ayaa sheegtay in ciidankiisu ay xoog ku saareen kuwa Ethiopia oo ay awood U sheegteen kaddib markii sida uu sheegtay ay u muujiyeen cudud millatari oo aysan ciidanka Ethipia u babac dhigi karin. kuwa Soomlaiya Diyaariyeen Laakin Cabsi ay Qabaan ay iskaga carareen Gobolka Hiiraan oo dhan oo Ay Quluubtooda Ilaah ku abuuray Cabsi.
Shiikha ayaa Yiri”Shariif been buu ku sheegay in Ciidamada Cadowga ah ay ka baxay Gobolka Hiiran ugu baxayn Wada Hadal ay lagaleen Garabka Jabuuti Wuxuuna Yiri Indha Cadde Runtiina hagardaamada iyo dhibaatada uu umadda Soomaaliyeed u geysanaayo qeyb kamid ah waaye. Ilaahey ha uga toobad keeno ayaan leeyahay arrintaas ,”
Sidoo kale Xogeeyahay Difaaca ee isbahaysiga Dib u xuraynta Dalka Soomaaliya Garabka Asmara Ayaa shegay in ciidankiisu ay galeen diyaar garow fara badan iyo inuu argagax badan Alle galiyey ciidanka Ethiopia, iyo waliba in ciidankiisu ay yihiin kuwa aan ka cabsaneyn geerida oo diyaar u yihiin in ay u shahiidaan Dalkooda
Ma ahan Markii ugu Horesay oo Eed u jeediyo Shiikh Yuusuf Indha Cadde gudoomiyaha Isbahaysiga Dib u xuraynta Dalka Soomaaliya Garabka Jabuuti Shiikh Shariif Shiikh Axmed Taasina waxay ku tusayaa in uu sii Qoto Dheeraanayo Is Qab Qabsiga ka Jira Isbahaysiga Dib u Xuraynta Dalka Soomaaliya ee Kala ah Asma Iyo Jabuuti.
Maxakamadaha islaamka ee Soomaalia oo Bandaw ku soo Rogay magaalada B/weyn ee xarunta G/Hiiraan
Saraakiisha Ciidamada Maxkmadaha islaamka ee ku sugan magaalada B/Weyn ee xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in magaalada B/weyn ay bandaw ku soo rogeen gobolkaasi.
Bandawgani ayaa waxa uu bilaabanayaa 10 fiidnimo ee caawa si loo xoojiyo amaanka magaalada B/weyn ee xarunta gobolka Hiiraan,waxana saraakiisha maxakamadaha islamka ay sheegeen in badawgani uu jirayo labada maalin ee ciida ah
Sheikh Xuseen Muxumud Gaagaale oo maanta meel fargaaro ah kala hadlay shacabka ku dhaqan magaalada xili salaaciida ay ku dukadeen Fagaaro ku yaala magaalada,waxaana uu sheegay in hadafka bandowga loogu soo rogay magaalada ay tahay sidii loo xoojin lahaa amaanka iyo in laga hortago kooxo burcad oo dadka dhaca xiliayada habeenkii ah.
Bandawga Maxkamadaha islaamka ay ku soo rogeen magaalada B/weyn ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ku soo aadaysa xili magaalada ay isaga baxeen Ciidamada Ethiopia talaabadaasina ay soo dhaweeyeen shacabka ku dhaqan magaalada B/weyn ee xarunta gobolka Hiiraan.
Magaalada Baydhabo oo ku ciidaysatay Qarax sababay dhimasho iyo dhaawac
Ciidul Fitriga maanta ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay sidii la rabay looga ciidin, iyadoo magaalada xaaladeeda ay aad u kacsantahay ka dib markii qarax uu dhacay ciida markii laga soo baxay..
Waxaa maanta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka ahna xarunta baarlamaanka KMG soomaaliya oo si fiican looga Ciidin, iyadoo dadka qaar baydhabo degan ay soomanyihiin, walaw dadka badankooda ay wada Ciideen.
Ilaa iyo dhowr masaajid oo ku yaala gudaaha magaalada baydhabo ayaa saakay laga tukaday salaada Ciida Fitriga, Takbiirta Allaahu Akbar Allaahu Akbar Allaahu Akbar laga maqlayay maajidada qaarkood, walaw aan masaajida kale aan wax takbiir ah laga aqrin.
Salaada Ciida Fitrig markii laga soo baxay ayaa waxaa Xaafad ka mid ah magaalada baydhabo si xoogan looga maqlay Qarax miinada meelaha fog fog laga maamulo oo lagula beegsaday ciidamo booliis ah oo gaari rooneed ah fuusahnaa xilligaasi.
Qaraxani oo si aad ah looga maqlay gudaha magaalada iyo daafadeeha ayaa shacabka reer baydhabo oo maanta farax iyo reen reen intuba isugu jirtay durbadiiba niyada ka jabay, iyadoo aan macquul ahayn in ay sidii ay rabeen maantay noqon oo magaalada xaaladeeda aan sahlaneen.
Waxaana magaalada baydhabo gudaheeda qaraxa ka gadaal laga maqlayay xabado oo aan lagareeneenin cida lagu ridayo, taasi oo qal qal ku abuurtay shacabka reer baydhabo oo maanta Ciida Fitriga ku gudaha jiro, dadka ay ka nasanayaan 29-kii maalmood ay bisha barakaysan ee Ramadaan ay ku dhexjireen.
Sikastaba ha`ahaatee, arinta ayaa waxay ku noqotay shacabka reer baydhabo mid fajac ah iyo colool xumo taasi oo aan ku farxar saneen ciida ay maatan ciidayaan.
Salaad Ciida Fitriga ka dib mar aan la sheekaystay dhaliyaro iyo caruur oo deegaan ku aha magaalada baydhabo ayaa iiga warbixiyay inaysan isu mid ahayn ciidaan iyo ciidihii ka horeeyay, taasi oo ay ku tilmaamay in magaalada oo dhan aan wax amaan ah kajirin ayna guryadooda isaga laabanayaa markii ay saaladda Ciida ay soo tukadaanba.
“Mar arkin wali ciidan ciida la mid ah oo aan qarax iyo xabad aan maqalno, waxay nala noqotayba maalmaha kale oo caadiga ah oo qarax iska dhacayay” hadalkaasi ayaa waxaa yir mid ah mid ah dhalinyarta ku dhaqan baydhabo oo si gaar ah aan ula sheekaysay.
ugu dambeyntii, Sidoo kale magaalada ayaa dadkii ka batay oo ka soo qaxay dagaalada muqdisho ka taagan marka xili walba magaalada xaaladeeda ma qiyaasna, iyadoo ay dadka iska dukaamayanayaa ayaa qarax aad la kulmaysaa waa si uu yiri Axmed Cali oo ah dadka dagan magaalada baydhabo baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Kismaayo: Dhinacyada Kismaayo oo burburiyey Kaniisadii Kutaalay magaalada Kismaayo, ayadoo meesheedii ka bilaabay Dhisme Masaajid.
Kooxaha maamulaya Magaalada Kismaayo ee xarunta Jubada Hoose ayaa maanta dhulka dhigay oo burburiyey Kaniisadii kutaalay Magaalada Kismaayo ee xarunta Jubada Hoose, waxaana goobtii laga burburiyey Kaniisada saakaba laga bilaabay Dhisme Masaajid.
Sababaha ay Kooxahan udumiyeen ayaa lugu sheegay in ay xaaraan tahay, aana loo baahneyn in Meel ka mid ah dhulka Soomaaliya aan laga taagi karin Kaniisado, markaasna aan la keeni karin waxyaabo kor uqaadaya Diinta Masiixiga,.
Wakiilka Warfaafinta Al-Shabaab ee Kismaayo Shiekh Yacquub oo ka soo jeeda Bessha Digil iyo Mirifle ayaa sheegay in ay burburintaan ka timid in Magaalo Muslim ah laga arko Kaniisad gaalo ah.
“ Go’aankan wuxuu ka soo baxay Madaxdeena waxaana sidaas lugu dhaqaaqay markii la arkay baahida loo qabo in ay meeshaasi noqoto Masaajid si ay dadka Islaamka ah ku cibaadeystaan” Ayuu yiri Sheikh Yacquub.
Kaniisadan ay dumiyeen Kooxaha Kismaayo maamulaya waxa ay ku taalaa ka soo horjeeda Beerta xoriyada Kismaayo, waxaana u dhow Masaajid weyn oo ay ku cibaadeystaan dad badan oo ku dhaqan Magaalada Kismaayo ee xarunta Jubada Hoose.
Dadka ku dhaqan Magaalada Muqdisho oo ku kala qeybsamay Munaasabadda Ciidda Soon-fur
Dadka ku dhaqan Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Dalka Soomaaliya ayaa waxay ku kala qeybsameen Ciidda Soon-fur, waxayna u kala baxeen kuwo Ciiday iyo kuwo Sooman oo sheegaya in ay maalinta berri ah ciidi doonaan.
Dadka maanta Ciiday ayaa waxay sheegayaan in ay u ciidayaan sabab la xiriirta iyadoo meelo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah laga arkay Bisha Soon-fur, isla markaana dalal badan oo kuwa Islaamka ah maanta laga ciidayo.
Laakin Dadka aan maanta ciideynin ee weli Sooman ayaa waxay sheegayaan in aysan arkin Bisha Soon-fur, sidaas darteedna ay sii dhameystiranayaan 30-ka Ramadaan, maalinta berri ahna ay Ciidi doonaan.
Marka la eego dadka Ciiday iyo kuwa Sooman ayaa waxay yihiin kuwo isu dhigma oo aan kala badneyn, waxaana meelaha la isugu yimaado la arkayaa dad sooman iyo kuwo afursan oo ay dhex-taalo dood ku saabsan in ay kuwa sooman ku saxsan yihiin soonkooda, halka kuwa afursan ee ciidayna ay difaacayaan in ay maanta tahay maalin ciid ah.
Sanadkan waxay dadka ku dhaqan Magaalada Mudisho u ahayd bisha Soon mid ay ku jireen xaalad dagaal, waxaana 15-kii dambe ee Bisha Ramadaan magaalada Muqdisho ka dhacayay dagaallo xiriir ah iyo duqeyn sababtay in ay dhintaan dad 70 ruux gaaraya iyo dhaawaca dad kale oo 200 oo ruux ka badan.
Xalay oo ugu dambeysay waxaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan Xaafado ka tirsan Degmada Wardhiigley ka dhacay dagaal xooggan oo dhexmaray Ciidamo ka amar qaata Dowladda Federaalka iyo Kooxo hubeysan oo ka soo horjeeday, wuxuuna ku beegnaa dagaalkaas xili ay dadka Muqdisho isu diyaarinayeen in ay cirka ka fiiriyaan bisha Soon-fur.
Si kastaba arrintu ha ahaatee, Ciiddan iyo Ciiddii Soon-fur ee ka horeysay ayaa waxay ku soo beegmeen iyadoo magaalada Muqdisho ay ka jirto amni darro aad u baahsan, taasi oo keentay in ay dad badan oo ku noolaa guryahooda oo Muqdisho ku yaala ay u barakacaan duleedyada magaalada Muqdisho, halka ay jiraan kuwo kale oo u barakacay gobollo ka tirsan dalka iyo weliba dalka dibaddiisa.
Magaalada Baydhaba oo si weyn looga ciiday
Magaalada Baydhaba ee Xaruta Dowlada Federaalka KMG ayaa si aan horay loo arag waxaa looga oogay Munaasabada Ciidul-fidriga, iyada oo Kumanaan dad weynaha Magaalada ah isugu soo baxeen Barxad weyn oo ku taala Ex.xaruntii hore ee Ciidamada Xoogagga Dalka Soomaaliyeed oo lagu magacaabo (Lama-galaay).
Goobta Salaadda lagu tukanayay oo aheyn mid aad u saxmad iyo cariiri badan ayaa waxaa ammaanka sugayay Ciidamo ka tirsan Midowgga Maxkamadaha kuwaa soo dadka ugu baaqay in ay dhowraan nidaamka, kana fogaadaan wax kasta oo keeni kara in uu ammaanku faraha ka baxo.
Markii ay soo dhamaatay tukashada Salaadda ayaa waxaa halkaas qudbado Diini ah ka jeediyay qaar ka mid ah Culimaa’udiinka Gobalka, waxaana mid ka mid ah qudbadihii halkaas laga jeediyay laga dheehan karay sida Culimadu uga xumaatay hadallo Laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da uu ka sheegay Shiikh Yuusuf Max’ed Siyaad Indha-cadde, waxaana ay Culi’madu soo dhaweeyeen hadalkii Shiikh Shariif Shiikh Axmed ee ahaan in Ciidamada Itoobiya looga saaray Magaalada Beledweyne wada hadal. Intii ay qudbadu soctay ayay Mas’uuliyiinta Xoogagga Maxkamadu halkaas ka sheegeen in laga bilaabo habeen danbe Magaaladu tahay Bandow si loo xaqiijiyo ammaanka guud ee Gobalka.
Dadka ku dhaqan Magaalada Baydhaba maanta oo kale ay u aheyd maalin farxadeed.
Dhamaan is-goosyada Magaalada ayaa lagu arkayaa dadweyne raxan raxan u socda isla markaana isku maraxbeynaya Musaabada Ciidda, waxaana xusid mudan in Caruurtu ahaayeen kuwii ugu badan ee maanta ka qeyb-qaadanayay damaashaadka iyo xuska loo sameynayay Ciidda, waxaana leenahay muslimiinta meel kasta oo ay joogaan (Kulu Caam Wa antum Bikheyr).
Seteembar 29, 2008
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Dalka Soomaaliya ayaa waxaa xalay ka dhacay dagaal culus oo la isugu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, kaasi oo u dhaxeeyay Ciidamada Dowladda Federaalka, kuwa Itoobiya iyo kuwa Amisom oo isku dhinac iyo Xoogag la baxay Dugsiga Raaskambooni oo ka soo horjeeday.
Dagaalka oo qarxay 2:30 habeennimo, isla markaana socday muddo saacad ku dhow ayaa wuxuu ka dhacay qeybo ka mid ah Wadada Makka Al-Mukarrama, halkaasi oo ay fariisimo ku leeyihiin Ciidamada Federaalka, kuwa Itoobiya iyo kuwa Amisom.
Khasaaraha ka dhashay dagaalkii xalay ayaa la soo sheegayaa in uu ka yaraa kuwii ka dhashay dagaallo horay uga dhacay Magaalada Muqdisho, waxaana inta la xaqiijiyay uu geystay dagaalkii xalay dhimashada labo ruux oo rayid ah iyo dhaawac 10 ruux ka badan.
Dagaalkii xalay waxaa sheegtay in ay ka dambeeyeen Xoogagga Dugsiga Raaskambooni, kuwaasi oo Afhayeenkooda Shiikh Maxamed Muxumed Dulyaddeyn uu sheegay in ay weerareen fariisimo ay Wadada Makka Al-Mukarrama ku leeyihiin Ciidamada Dowladda Federaalka, kuwa Itoobiya iyo kuwa Amisom, wuxuuna sheegay in ciidamadii halkaas ku sugnaa ay dhibaato u geysteen , halka uu sheegay in dhinacooda ay soo gaareen dhaawacyo fudud oo aan badneyn.
“Dagaalkii xalay waxaa uu ku beegnaa 29-ka Ramadaan oo ka mid ah Habeennada Leylatul Qadarka, wuxuuna qeyb ka ahaa dagaallo xiriir ah oo aan soo wadnay Bishii Ramadaanka oo dhan”ayuu yiri Shiikh Maxamed Dulyaddeyn oo sheegay in ay ka tacsiyeynayaan dhibaatadii dadka shacabka ah ka soo gaartay dagaalladaas.
Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Dalka Soomaaliya ayaa 15-kii dambe ee bisha Ramadaan waxaa ka dhacay dagaallo iyo duqeyn la socotay oo geystay dhimashada dad rayid ah oo ka badan 60 ruux iyo dhaawac iyana kor u dhaafaya 200 ruux, kuwaasi oo ay guryahooda ugu tageen madaafiic ay is-weydaarsanayeen dhinacyada ku dagaallama Magaalada Muqdisho.
Si kastaba arrintu ha ahaatee, Dagaalkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa wuxuu daba socdaa dagaallo xiriir ah oo dhawaanahan dhexmarayay Ciidamada Dowladda Federaalka, kuwa Itoobiya iyo kuwa Amisom oo isku dhinac ah iyo Xoogagga wax iska caabinta ee ka soo horjeeda, waxayna dagaalladaas geysteen khasaare dhimasho, dhaawac, burbur hantiyeed iyo barakac isugu jira, kuwaasi oo soo gaaray dad rayid ah oo aan waxba galabsan.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Seteembar, 2008.